Bakalorea 2020 : nohamafisina ny fepetra isorohana ny fivoahan’ny laza adina mialoha | NewsMada
Bakalorea 2020 : nohamafisina ny fepetra isorohana ny fivoahan’ny laza adina mialoha
Nomena lanja manokana ny fitandroana ny filaminana sy ny fisorohana ny fihovahan’ny laza adina mialoha ny fotoana ho an’ny bakalorea. Mampitandrina ireo manely vaovao tsy marina amin’ny tambazotra koa ny mpitandro filaminana.
“Nampiharina ny fe­petra rehetra isorohana ny fi­voahan’ny laza adina mialoha ny fotoana toy ny tamin’ny fanadinana bakalorea ny taon-dasa”, hoy ny talen’ny fandriampahalemana sy ny fanangonam-baovao (DSR), kolonely Ravoavy. Nampi­tom­boina ny isan’ny mpitandro filaminana misahana ny fiambenana sy fanaraha-maso ny toerana fihibohan’ny mpampianatra sy ny mpandraharaha mikarakara ny laza adina. “Lasa avo roa heny ny isany ary 5%-n’ny olona mihiboka dia hitandro ny filaminana avokoa”, hoy ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony eo anivon’ny minisiteran’ny Fampianarana ambo­ny, profesora Rajaona­rison Jean François, omaly teny Fiadanana. Manentana ny mpiadina sy ny ray aman-dreny koa ny tomponandraikitry ny DSR hifantoka amin’ny fiatrehana ny fanadinana fa tsy hiroaroa saina amin’ny vaovao tsy marina mety misy manely. Hatreto, tsy nisy ny fitarainana tonga teny anivon’ny mpitandro filaminana momba izany. Ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ihany no tomponandraikitra afaka mamoaka vaovao ma­nodidina ny fanadinana.
Efa vonona ny laza adina ary tafapetraka eny anivon’ny toerana handraisana azy mialoha ny fanadinana. Hentitra ny fepetra hisorohana ny olana samihafa mety hitranga. Tsy azo atao koa ny mitangorona manakaiky ny ivontoeram-panadinana rehetra manerana ny Nosy.
Hanomboka ny 19 oktobra ny fanadinana bakalorea ary hifarana ny 29 oktobra ho avy izao ho an’ny fampianarana ankapobeny sy teknika.
164 338 ny isan’ny mpiadina
164 338 ny isan’ny mpiadina amin’ny fanadinana bakalorea manerana ny Nosy amin’ity taona ity. Fampianarana ankapobeny: 154 197. Teknika: 10141. Efi­trano handray ireo mpiadina: 6924. Adiny roa mialoha ny fanadinana dia efa misy olona afaka mandray ny mpiadina ny ivontoerana ialana amin’ny filaharana sy ny fitangoronana.